Manchester United Oo Weli Xiiseyneysa Saxiixa Jan Oblak
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester United oo weli xiiseyneysa saxiixa Jan Oblak
April 10, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay weli isha ku heysoinay Old Traffordn inay keento goolhayaha Atletico Madrid Jan Oblak .
28 jirkaan ayaa markale qaab ciyaareed cajiib ah ku jira kooxda Diego Simeone xilli ciyaareedkan, isagoo shabaqa ilaashaday 16 kulan 37 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan, waxaana laga dhaliyay kaliya 30 jeer.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Slovenia ayaa iska dhigay mid ka mid ah horjoogeyaasha horyaalada Yurub intii uu joogay Atletico, iyadoo Man United loo maleynayo inay xiiseyneyso muddo dheer adeegyadiisa.
Dean Henderson ayaa dhawaan badalay David de Gea oo noqday goolhayaha koowaad ee Man United, waxaa lafilayaa inuu galo booskasi , ugu yaraan Premier League, inta ka harsan xilli ciyaareedkaan.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay 90min , kooxda 20ka jeer hanatay horyaalka Ingariiska ayaan gabi ahaanba ku qanacsaneyn xaaladdooda goolhaye ee kooxda, iyadoo De Gea laga yaabo inuu u dhaqaaqo suuqa soo socda.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in kooxda Ole Gunnar Solskjaer ay shaki ka qabto Henderson inuu ku habboon yahay booska koowaad, dhanka kale, Oblak ayaa weli ah bartilmaameedka koowaad ee kooxda.
Ninka reer Slovenia ayaa la rumeysan yahay inuu qandaraaskiisa haatan ee Wanda Metropolitano lagu burburin karo £ 103m.